Ny capacitor sarimihetsika dia manana dielectrics efatra, ary tsy mitovy ny fitaovana dielectric. Ny fahombiazan'ny capacitor sarimihetsika manify dia hafa ihany koa. Ny fampandrosoana ny PP () dielectric film capacitors miniaturized teknolojia dia lasa be mpampiasa dielectric.
Ny sarimihetsika capacitor dia manana dielectrics efatra, ary ny fitaovana dielectric dia samy hafa, ary ny fahombiazan'ny sarimihetsika manify dia tsy mitovy. Alohan'ny hampiasana ny capacitor elektronika herinaratra, ny PET kely sy ambany dia ampiasaina ho fitaovana ankapobeny, ary ny PET dia mety amin'ny mari-pana isan-karazany, ary manana adaptatera ambony kokoa amin'ny fitaovana an-trano, jiro ary sehatra hafa. Miaraka amin'ny fanitarana ny fatra avo, ny fampiharana amin'izao fotoana izao, ny fampiasana dielectric PP miaraka amin'ny toetra avo lenta avo lenta dia mihatsara, ary ny fampandrosoana ny teknolojia PP dielectric capacitor miniaturization dia nahatonga ny PP ho dielectric be mpampiasa.
Ny dielectric PPS dia akaiky kokoa ny dielectric PP, ny fanoherana ny hafanana PPS dia avo kokoa, ary mety kokoa amin'ny tontolo iainana avo lenta, fa ny vidiny dia avo kokoa, bebe kokoa ho an'ny vokatra namboarina.
Ny dielectric PEN dia fanoherana hafanana avo, fa raha oharina amin'ny toetran'ny mari-pana amin'ny PP sy PPS, dia kely kokoa ny fampiharana.